Archives Tutorials - SmartMe
Dom » Archive araka ny sokajy 'Guides'
Fianarana ho an'ny be taona - Ahoana ny fametrahana Chrome Browser
SmartMe ho an'ny be antitra
Tokony ho an'ny rehetra ny teknolojia, ary isa fotsiny ny taona fa tsy mahavariana;) Manohana ny zokiolona izahay ary manohana ny fampielezan-kevitra toa an'i Paweł, tonian-dahatsoratray, izay namoaka horonantsary nanehoany ny fomba hametrahana ...
Ahoana ny fomba fampiraisana ireo fitaovana Xiaomi / Aqara amin'ny vavahady - na dia tsy ao anaty fampiharana aza izy ireo!
Nividy sensor ianao fa tsy ao anaty app izany ary heverinao fa vola natsipy tany anaty tatatra? Aza manahy! Mety hitranga izany fa noho ny fitarihanay dia hanampy anao ihany!
BleBox, Home Assistant, Tutorials, hevitra
switchBox avy any Blebox, ny maodelin'ny famindrana hazavana poloney
blebox, boaty switch v3
Nahazo modely 4 ho an'ny fitsapana avy amin'ny BleBox, orinasa poloney efa 5 taona teny an-tsena. SwitchBox dia hiseho voalohany amin'ny fanadihadiko. Manasa anao am-pitiavana aho amin'ny lahatsoratra! Alohan'ny hahatongavako amin'ilay teboka, dia mendrika ...
Trano Smart ho an'ny vao manomboka - Smart Switches
mampifandray switch, toro-hevitra ho an'ny vao manomboka, jiro resaka
Mampivelatra asa an-trano an-trano ve ianao? Ny iray amin'ireo singa ao aminy dia ny switch switch. Izany no antony nanapahako hevitra hanomana torolàlana momba ny karazana switch sy ny fomba hampifandraisana azy ireo. Ao amin'ny forum sy tranokala mbola misy fanontaniana momba ny fomba fampifandraisana ...